Tooshyada biyuhu ee biyuhu ka dillaacaan ee Anker ayaa ku dhawaad ​​aad u dhalaalaya waxayna iib yihiin 7,99 $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Iftiimiyaasha biyaha ee Anker-ka biyuhu waa kuwo aad u dhalaalaya waxayna iib yihiin 7,99 $ - BGR
Tooshyada biyuhu ee biyuhu isticmaalaan ee Anker-ka ayaa ah kuwo aad u dhalaalaya waxayna iib yihiin 7,99 $ - BGR
Waxaa laga yaabaa inaadan toosin subaxnimadan adoo ka fikiraya inaad iibsato toosh cusub, laakiin waxaa la joogaa waqtigii aad ku bedeli lahayd laambadaas duugoobay ee laga yaabo inaysan mar dambe shaqeyn. Xitaa markii ay shaqeynayeen, si dhib yar ayey u shido qol. Dhanka kale, laba Anker toosh ayaa hadda lagu iibiyaa Amazon waxayna u badan tahay inay iftiimin doonaan gurigaaga oo dhan. Haddii aad rabto moodel biyo adag oo fiican oo la shaqeeya baytariyada AAA, toosh tooshka loo yaqaan (LED toosh) Anker Bolder LC30 wuxuu hoos ugu dhacay 7,99 $ maanta haddii aad isticmaasho koodhka kaararka ANKERL30 markaad dalbayso. Haddii aad rabto moodel dib loo soo celin karo xitaa dhalaalaya, tooshka tooska ee loo yaqaan 'LED toosh' Anker Rechargeable Bolder LC40 waxaa loo yareeyay 16,99 $ oo leh koodh xayeysiis ANKERL40. Marka, dhakhso!
Anker Bolder LC30 Iftiinka Laydhka
SUPER-BRIGHT: Cree LED ee nalalka 300 (50000 saacadood cimrigiisu). Toosh yar-yar oo toosh leh oo iftiimaya si loo iftiimiyo baro mugdi ah iyo meelaha bannaan. Waxaa ku jira qaabab Sare, Jaban iyo Strobe.
NOLOSHAADA LIISKA: Ilaa saacadaha 6 ee iftiin xoog leh oo ku jira mowduucyada iftiinka yar ee ka yimaada baytariyada 3 AAA.
XAALADA BIYAHA: Waa mid loo hoggaansan yahay IPX5. Waxaa loogu talagalay inay ka hortagto walxaha inay soo galaan oo ay bixiyaan iftiinka xaaladaha u dhexeeya roobka culus ilaa deyrarka iyo boodhka. Jidhkeeda aluminiumka cimriga dheer iyo naxdinta u adkaysata jidhka ayaa iska caabbisa maaraynta si kadis ah.
Way fududahay in la xajiyo: khafiif ah oo fudud oo la qaado, dhammeysiga aan kala-goyska lahayn wuxuu gacanta ku hayaa gacanta xaalado aad u xun.
WAXAAD KA HELI KARO: Anker Bolder LC30 Toosh, hagitaan soo dhaweyn ah, iyo damaanad qaadka billaha ah ee 18 iyo adeegga macaamiisha saaxiibtinimo ee saaxiibtinimo.
Anker Rechargeable Bolder LED Toosh LC40
SUPER-BRIGHT: Cree LED ee nalalka 400 (50000 saacadood cimrigiisu). Toosh laakiin toosh toosh leh si loo iftiimiyo dhibic, meel ama meel mugdi ah. Tilmaamo sare / Dhexdhexaad / Hoose / Strobe / SOS modes
DAAWADA LENGTH: ilaa saacadaha 20 (qaabka beam dhexdhexaad ah) laga soo bilaabo dhalaalaya xoog leh oo sii yaraanaya iyo nusqaaminta iftiinka iyadoo ay ugu wacan tahay batteriga 3350 mAh tayo sare leh ee dib loo soo celin karo. Nalalka LED-yada waxay leeyihiin cimri dheeri ah oo ah saacadaha 50000. Kusoo ooga saacadaha 6 oo leh 5V 1A adapter (aan la keenin) iyo fiilada USB USB la keenay.
UJEEDADA IYO XIDHIIDHKA: waxay u hoggaansan tahay heerka IP65. Waxaa loogu talagalay dhammaan xaaladaha, roob culus oo ku nool deegaannada qallalan iyo boodhka. Jirkeeda aluminium waara iyo iska caabbinta naxdinta leh ayaa iska caabbisa maaraynta si kadis ah.
Way fududahay in la xajiyo: khafiif ah oo fudud oo la qaado, dhammeystirka si tartiib-tartiib ah gacanta ugu jira gacanta xaalado aad u xun.
WAXAAD KA HELI KARO: Anker Bolder LC40 Tooshka Dib-u-Soo Kordhin Karo (oo ay ku dhexjirtay baytari soo-saare 3350 mAh), hage soo dhaweyn ah, Micro USB cable-ka iyo damaanad-qaadka bilaha ah ee 18 iyo adeegga macaamiisha saaxiibtinimo.
Raac @BGRDeals on Twitter Si aad ula socodsiiso dalabyada ugu dambeeyay iyo kuwa ugu weyn adduunka oo dhan. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Qalabka dhegaha ee 40 $ Anker, $ 17 $ Wi-Fi oo dheeri ah, $ 21 Echo Dot gawaarida, $ 6 $ xirmooyinka smart, $ 100 sicirka iPad, oo lagu daray - BGR
Wireless-ka ku dallacsiiso iPhone-kaaga iyo Apple Watch waqti isku mid ah oo ah xamuulka 29 $ - BGR